Ergamni OPDO Sab Boonummaa Oromoof Balleessuuf Uummata Oromoo Balleessuu Dha – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooErgamni OPDO Sab Boonummaa Oromoof Balleessuuf Uummata Oromoo Balleessuu Dha
Ergamni OPDO Sab Boonummaa Oromoof Balleessuuf Uummata Oromoo Balleessuu Dha:
OPDOn erga uumamtee kaaftee kan itti himamaa fi ittiin qaramaa dhufte akka sab boonummaa Oromoo balleessituu dha. Lapheen ishee, sammuun ishee, yaadnii fi yaaddoon ishee rakkinni Impaayeera Itoophiyaa sab boonnummaa Oromoo akka tahetti beekti. Har’a Sab boonnummaan Oromoo bakka baduu danda’u irraa darbee jira. Kana booda sab boonnummaan Oromoo balleessuuf qabsawwan Oromoo akka kana duraa ajjeessuun, hidhuuun, uukkaamsuu fi balleessuun gahaa miti. Kana booda akkeeka ishee kana bakkaan gahuuf Uummata Oromoo milliyoona baayyeen lakkawwamuu yoo dandeesse lafa irraa haxooftee balleessuuf akka akeekatee jirtu ifatti argaa jirra. Uummatni Oromoo ejjennaa OPDO kana adda baase hubachuun barbaachisaa dha. Dhumaatii dhufaa jiru irraa dandamachuu yoo barbaade uummatni keenya akka bara darban lamaanii hark wal qabatee irree tokkon ka’uu qaba.
Kononeel Abiyi (yoo Oromoo dha taheef waan inni ani ilmaa Oromoo ti jedhu hin dhageenyeef, malee Oromummaa isaa waakachuuf miti) namoota siyaasaa Oromoo gageessan irraa kan adda isa godhu amala qofxi (unique) tahee kan warri nafxanyootaa wajjin wal fakkaatu qabachuu isaa ti. Impaayeera Itoopiyaa keessatti aangoon kan maddu Masaraa Miniliki keessa akka tahe galeef jira. Kanaafu gaafa muudame akkeeka Miniliki bakkaan gahuuf hawwii akka qabu nuuf hime.
Impaayeerri Itoophiyaa Raayyaa Ittisa Biyyaa hin qabdu, qabaatees hin beektu. Raayyaa ittis Biyyaa kan jedhamuu yoo sareen illee Masaraa Miniliki seentee kan ishee eegu malee kan daangaa biyyaa fi uummata biyyaa eegu tahee argee hin beeku. Silaa akka seera biyya lafatti Raayyaan Ittisa Biyyaa partii yookaan mootummaa tokkoo tahuu hin qabu. Yaroo Mootummaan geedaramu wajjin geedaramuun hin barbaachisu. Kan nageenya Mootummaa fi hawwasaa eeguu qabu humna poolisii taha malee Rayyaa Ittisa Biyyaa miti.
Kan Impaayeera Itoophiyaa waan hunduu fuggiiso (contradiction) dha. Biyya lafaa irratti dirqamni humni Raayyaa Ittisa Biyyaa daangaa biyyaa fi uummata biyyaa eeguu dha. Raayyaan Ittisa Biyyaa Impaayeera Itoophiyaa Uummata nagaa fixa. Qabeenya uummata barbdeessa. Uummata biyya isaa samma, hidha, ajjeessa, dubartii gudeeda. Haala suukaneessa kana uummata biyyaa isaa nagaan jiraatu irraatti raawwachuu miti Orma irratti iyyuu raawwachuun seera biyya lafaan isa gaafachiisaa.
Miseensonni Raayyaa Ittis Biyyaa ijoollee hiyeessaa barumsaa fi waan ittiin jiraatan hin qabne mindaa nyaachuuf itti galan malee beekumsaa fi dammaqinsa qabaatanii biyyaa fi uummata isaanii tajaajiluuf warra keessa galan miti. Ajaja namni isaan oli itti kennu bakkaan gahuu malee gaaffii biraa kaasuu fi diduu hin danda’u. Warri ajaja tahan kun ilmaan nafxanyootaa fi ayyaan ilaalatoota waan tahaniif hammenya uummata irra gahuuf dhima hin qaban.
Uummatni Oromoo namoota walaala kana jalatti naannowwan komandi postiin bulan hammeenyi himamee hin dhumne irratti rawwatamaa jira. Baayyee nama aarsa. Waan jedhan nama walaashisa. Gaddi nutti dhaga’amu kan sammuu nama hadoochu. Naannoowwan Oromiyaan hunduu hammenya kana boru argachuuf akka jiran mamuu hin qaban. Har’a teenyaa wal irratti ilaaluu dhiifnee boru kan koo jennee harka wal qabannee haa kanu.
Shira nafxanyoonni nuuf qopheessaa jiran teenyee ilaalu hin qabnu. “Ilmi Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki seenee jiraa” fi “Bilsoomnee jirra” jenne of gowwomsuu fi wal gowwomsuun haa dhaabbatu. Warri dhiiga uummata keenyaan dantaa mataa keenyaa gutachuuf har’a ka’aa boru taa’aa, har’a bahaa boru galaa jenne uummta burjaajjessa jirru dhaabbachuu qabna. Ummatni keenya harka wal qabatee qabsoo hadhooftuuf of qopheessuu malee filmaata biraa hin qabu. Qophiin nafxanyoonni gochaa jiran uummata keenya miliyoona hedduun lakkawwamu kan gaga’uuf deemu. Biyyaa keenyaa fi gola keenya keessatti of ijaaraa jiru. Haaduun ilmaan keenya jaallannu kana nu jalatti akka hoolaa gorra’uuf deemu. “Bineensi argan nama hin nyaatu” jedhan. Guyyaa lamaan kana keessa kan tahe mallattoo isa dhufuuf deemuu ti.
Raayyan Ittisa Biyyaa Imaayeera Itoophiyaa akka nafxanyoon faarsaa oolan sana miti. Ija koo dura yaroo meeqa injifatamee jira. Bara Dargii harka Mootummaa Somaaletti yaroo cabu, Kuuba, Yemenii fi Raashaatu lubbuu ooshe. EPLFiin injifatameera. TPLFiin injifatamee akka kadhatuu tahu godhamee jira. Qeerroo Oromoon injifatee jira. Rakkinni Qeerroo Oromoo erga injifatee kadhattuu gochuu dhiisee galee tahu dha. Galmi qabsoo siyaasaa aangoo qabachuu tahuu dagannee har’a galagalee haaluu nu bahaa jira.
Ergamni OPDO Sab-Boonummaa Oromoo Bal'eessuuf Uummata Oromoo Dogongorsuudha:
Damee Boruu tiin | 10/30/2019 OPDOn erga uumamtee kaaftee kan itti himamaa fi ittiin qaramaa…
Sab-boonummaa Oromoo Laamshessuuf Shirri Dalagamu Kamuu Laaftuutti Ilaalamuu Hin Qabu (Ijoo Dubbii ABO - Ebla…
Uummatni keenya Oromoon amala Leenca Dulloomee of irraa gatuutu furmaata fardiidha!
OROMO: BEARING THE BRUNT OF THE ENDLESS AND UNNECESSARY